I-china 5263 3-Stage Under Sink Tankless Household Reverse Osmosis System mveliso kunye nabenzi | Icebo lokucoca ulwelo
I-5263 3-Inqanaba Phantsi kweSink engenaTanki engenamakhaya yokuguqula inkqubo ye-Osmosis
Itanki engenanto iTshayina yokubuyisela umva inkqubo yokuhluza iqinisekisa amanzi amatsha rhoqo.
Isusa ukungcola okuninzi kubandakanya i-TDS, isinyithi esinzima, ibhaktiriya emanzini akho empompo.
Ukusetyenziswa kwexesha elinye usebenzisa iCartridge egcina izixhobo zokucoca ukonga ixesha lakho lokucoca kunye nokuphepha ungcoliseko lwesibini.
2 in 1 icwecwe lokucoca icompact, gcina indawo yakho engaphantsi kwesinki kwaye kulula ukuyibuyisela endaweni.
Hluza umboniso wobomi kunye nokuseta kwakhona, jonga ngokulula ukuba utshintshe nini isihluzo sakho.
Exabisekileyo i-RO yokuCoca uMzi weKhaya
Ukucocwa kwenqanaba lesithathu legradient kuvelisa amanzi amnandi, acocekileyo ngokuthe ngqo kwitepu yakho yasekhitshini, elula ngakumbi kunye ne-eco-friendly kunamanzi amaninzi asebhotileni. Ungonwabela amanzi amsulwa, iikristale ezicacileyo zomkhenkce, ikofu ehlaziyayo kunye nokutya okungcono.
Elungiselelweyo Real-ixesha Display
Isicoci samanzi esiyi-smart RO sinomboniso wexesha lokwenyani ekuncedeni ujonge umgangatho wamanzi ngendlela efanelekileyo, enje nge-TDS yamanzi acociweyo, isibonisi sokutshintsha isihluzo, njl njl.
Le nkqubo ye-compact reverse osmosis iza nomzimba omncinci we-ultra kunye nokuguquguquka kwayo kucingelwa ukuba kulungelelanise nasiphi na isitayile sasekhaya. Ngokungafaniyo neeyunithi ezininzi ze-RO, inoyilo olungenantambo kwaye inokudala indawo efanelekileyo yekhitshi.
Ukujija kunye nokuTsala uyilo
Ngokujija nje okulula, ukutshintshwa kwesihluzi kwesi sihluzo samanzi se-RO kunokwenziwa ngokulula ngaphandle kokuphuphuma okanye ukuvuza. Akunyanzelekanga ukuba ucime amanzi angenayo okanye uphakamise isixhobo njengesiqhelo.
Ukufakwa ngokulula kunye nokutshintsha
Esi sihluzi samanzi se-RO siza nokujijisana nesixhobo sokucoca isitayile, esilula ngokwaneleyo ukuba ungasifaka kwaye usitshintshe amacebo okucoca njengoko unqwenela. Icala lethu lobugcisa lokumisa amanzi eline-bi-directional ngokukodwa elungiselelwe i-cartridge ye-filter luncedo olukhulu ekuthinteleni ukuphuma kwamanzi kwi-cartridge, ke awunakucima amanzi angenayo xa ujija wona.
Ukusebenza okuphezulu ngamanqanaba ama-3
Inqanaba lokuqala: I-CF ibandakanya i-PP kunye ne-CB. Isihluzi se-PP sediment (10-15μm) sinokubamba i-colloid, i-sediment, i-rust, amasuntswana amakhulu kunye nokungcola okunqunyanyisiweyo; I-Carbon block (5-10μm) inokususa intsalela yeklorini (≥85%) kunye ne-COD (≥25%);
Inqanaba lesi-2: I-membrane ye-RO (0.0001μm) inokuthintela ii-ion ezinyibilikileyo ezinje ngesinyithi esinzima, kunye nee-microorganisms ezinjengebacteria ye-coliform. Ireyithi yetyuwa yetyuwa ngu> 95%. Sine-75G, 400G, 500G kunye ne-600G onokukhetha kuyo. Zombini iToray kunye neDow ziyafumaneka.
Inqanaba lesithathu: I-block block ye-carbon (10-15μm) inokususa i-chlorine eseleyo, i-carbon tetrachloride, i-methane ngenqanaba lokususa ukuya kuthi ga kwi-85% kuyo yonke le nkqubo, kwaye inokususa imibala, ivumba kunye nencasa embi emanzini. Ikhabhoni ye-antibacterial ikhethiweyo ukuthintela ukukhula kweentsholongwane.
Umba I-RO3A-75E / M
I-RO3A-400E / M
I-RO3A-600E / M
Umgangatho wohambo 0.2L / min （75G）
Ubukhulu I-RO3A 445 × 130 × 420mm
I-RO3B 459 × 145 × 420mm
I-RO3CD 458 × 140 × 435mm
Lobushushu Working 5-38 ℃
Uxinzelelo lokusebenza 0.1-0.4Mpa
Umdibaniso Inlet: 3/8, PE ityhubhu, amanzi ahlambulukileyo kunye nenkunkuma: i-1/4, ityhubhu ye-PE
Icebo lokucoca ulwelo I-CF (PP + isikali inhibitor CB) + RO + CB (intsholongwane ekhoyo)
Iimpawu-E (uqoqosho) Icebo lokucoca ulwelo lobomi bonke kunye nokuseta kwakhona; ukukhusela ixesha elongezelelekileyo; itephu eqhelekileyo
Iimpawu-M (ingxelo yokugqibela) Icebo lokucoca ulwelo lobomi bonke kunye nokuseta kwakhona; ukukhusela ixesha elongezelelekileyo; itephu efanelekileyo; Umboniso we-TDS; ukhuseleko lokuvuza kwamanzi; ukugungxula ngobuchule; imowudi yeholide
Egqithileyo I-5262 3-Inqanaba Phantsi kweSink yeNkqubo yokuSebenza kweOsosis yangaphakathi
Okulandelayo: I-5264 3-Stage Phantsi kweSink Household Reverse Osmosis System
Eyona ndlela ibuyileyo yokubuyisela umva kumanzi e-Osmosis
Icompact Reverse Osmosis System
Inkqubo yokuSusa iOsosis yangaphakathi
Inkqubo eNdlu epheleleyo yokuBuyisa iOsmosis
5214 3-Stage Phantsi Sink Household Ultrafiltrati ...
5267 Ngaphantsi kweSink Household Compact Reverse Osmos ...
5264 3-Inqanaba phantsi kweSink Household Reverse Osmos ...
I-5262 3-Inqanaba eliphantsi kwesinki yokuguqula umva i-Osmosi ...
5210/5211 3-Inqanaba eliphantsi kweSink Household Ultrafil ...
5268 2-Inqanaba eliphantsi kweSink Household Reverse Osmos ...
Indlu yonke yokuCoca uManzi, Hluza iCartridge, Umcoci wamanzi waManzi aKhuni, Cofa inkqubo yokuCoca amanzi, Eyona Ndlela yokuBuyisa iOsmosis, Ukutshintshwa kweFilitha yeCartridge yaManzi,